Wasiirka maaliyadda dalka Japan ayaa sheegay inuu celinaya mushaarkii uu qaadanayay sanad dhan iyo sababta | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Wasiirka maaliyadda dalka Japan ayaa sheegay inuu celinaya mushaarkii uu qaadanayay sanad...
Wasiirka maaliyadda dalka Japan ayaa sheegay inuu celinaya mushaarkii uu qaadanayay sanad dhan iyo sababta
Wasiirka maaliyadda dalka Japan ayaa sheegay inuu celinaya mushaarkii uu qaadanayay sanad dhan kaddib markii wasaaraddiisa lagu helay faddexaad ah inay si sharci darro ah wax uga baddashay dokumeentiyada dadweynaha.
Baaritanno la sameeyay ayaa lagu ogaaday in Ra’iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe iyo xaaskiisa laga saaray dokumeenti ay ku xusnaayeen oo ku saabsanaa dhul dowladda ay leedahay oo lagala iibsaday oo muran badan dhaliyay.
Wasiirka maaliyadda Japan Taro ayaa aqbalay inuu ku lug lahaa fadeexadda islamarkaasna sheegay in arrintaasi ay dhaawacayso kalsoonida shacabka ay u hayaan wasaaradda iyo xukuummadda.
Wasiirka ayaa intaasi ku daray inuusan isku casilaynin fadeexadda darteed.
Ra’iisul wasaaraha Japan ayaa lagu eedeeyay musuq maasuq ilaa markii ay soo ifbaxeen wararka ah in nin Iskuul ka shaqeeyo uu xiriir la lahaa dhul ay xaaska Ra’iisul wasaaraha iibsatay oo qiimo dhimis aan caadi ahayn ay ku heshay.
Inkastoo Ra’iisul wasaaraha uu iska fogeeyay inuu ku lug lahaa wax isdabo marrintaasi.
Shir jaraa’id uu maanta qabtay ayuu wasiirka maaliyadda Japan ahna ku-xigeenka Ra’iisul wasaaraha sheegay in aanan la qabali Karin in dokumeentiyada wax dowladda been abuur lagu sameeyo ayna tahay arrin laga qoomameeyo.
Wuxuuna sheegay inuu celinaya mushaarkii uu qaadanayay sanad dhan oo gaaraya 30 milyan oo lacagta Yen-ka ah oo u dhiganta $274,000.
Sida uu sheegay Aso, mid kamid ah mas’uuliyiinta ugu sarraysa dalkaasi ayaa isku casilay fadeexadda darteed halka 20 kalena ciqaab la marsiiyay.
Previous articleSida uu baahiyey Wargeyska World street journal Dekeda magaalada Berbera ee jamhuuriyada somaliland ayaa ka mid ah dekedaha muhiimka ah ee ku dhaw marinka caalamiga ah ee Canal Suez
Next articleUrurka xasaradaha adduunka ayaa ka digaya in muranka wadamada khaliijka uu halis ku yahay dawlada xamar iyo maamul gobaleedyada,